Marka Guurka Laguu Diido Iyo Wixi Kula Soo Gudboonaado!!! (Qiso Xiiso Badan) | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Guurka Marka Guurka Laguu Diido Iyo Wixi Kula Soo Gudboonaado!!! (Qiso Xiiso Badan)
Marka Guurka Laguu Diido Iyo Wixi Kula Soo Gudboonaado!!! (Qiso Xiiso Badan)
Bulsha:- Waad salaamantihiin walaalaha qeymaha badan ee kuxiran websitekan qaaliga ah. Maanta iyo maqaalkeena wuxuu kusaabsanyahay caado aad ufool xun Quursi oo ubaahan in la’iska kaashado cirib-tirkeeda.
Sagaashamaadkii ayaan kaqeybgaley aaska hooyo Soomaaliyeed oo kugeeriyooday magaalada Nairobi ee wadanaka Kenya! Waxaa qabriga isku tuuray nin dheer oo sitay funaanad ay kuqorantahay “Quursigu qiil maleeyahay” si’uu iilka udhigo meydka! Waxaa la’igu sheegey inuu ahaa wiilkeeda oo ushaqeeya BBCda,laanta afka Soomaaliga. Inkasta oo aan hortaagneyn meyd iyo mowqif kuxasuusinaya Aakhiro, hadana hadalka funaanada kuqornaa wuxuu igu reebey xasuus!
Xusuusin: cunsiriyada carabta ama soomaalida dhexdeeda iyo Diinta Islaamka yaan la’isku qaldin! Sheekada maqaalka Sheekada ugu weyn ee maqaalkaan keentey waxay aheyd markii aan lakulmay oday Soomaaliyeed oo kacabana wiilkiisa oo guur loo diidey! Sheekadan oo dhowr waji leh, waxaa xusid mudan in odaygan kasoo jeedin dadka xooga lagu heeb-soocay, wuxuuna yiri isagoo kasheekeynaya wixii kudhacay:
“Wiil aan dhalay oo dagan wadanka Norway iyo gobar Soomaaliyeed ayaa go’aan ku gaaray inay isguursadaan; waxayna kuheshiiyeen inuu nikaaxu kadhaco magaalada Doha maadama aniga iyo gabadha adeerkeed soo korsadey wada daganahay halkaan.
Nasiib wanaag, gabadha adeerkeed waa raggii aan mudadada dheer wada joogney wadanka Qatar. Kulan iyo iswaraysi kadib waxaan kuheshiiney inuu nikaaxu dhaco isbuuc kadib.Waxaan farta kasaaray lacagtii howsha lagu qabanlahaa!
Odayga maadama uu nala wadaagay dareenkiisa iyo sida looga gardaranyahay,waxaan isku daynay inaan samirsiino anagoo xasuusinay in dad badan oo Soomaaliyeed sidaas lagu sameeyo hortiis ayadoo wax ay galabsadeen aysan jirin. “Maxkamad la’aan ayaa laxukumay inaan loo guurin, lagana guursan maadama ay yihiin gabooyo, midgaamo iyo magacyo fara badan oo aan lagaraneyn meesha laga soo guuriyey!”.
Subxaanallaah, waa kanaa odaygkii oo isbadal! Walaahi magaranayo waxaa ku keeney isbadalkaas.Inta aamusay oo neefsada ayuu kujawaabay “Ilaahbaa nalahe, anigaba kuwaas uma guuriyeen gabar aan dhalay”.
Yaab iyo amakaak iyo cadaalad xumo intaas la’eg! qof diidan in isaga latakoorin laakinse dulminaya umadda kale! “Hadaa maxaad ugu xuntahay waxa wiilkaada kudhacay? Waxaad aaminsantahay ayaa lagugu ciqaabay!”
Saacid C/laahi Aaden, Copenhegan, Denmark
Waxaan ku talin lahaa in walaalaha laquursaday ee la qabatimay quursiga – lagu qanciyo in kan quursanayaa uusan waxba dheerayn ee uu la siman yahay.
Intaan garaadsaday cid matakoorin muslimkuna wuu ii sinnaa laakiin aniga waa la i takooray markii aan imid waddanka aan ku noolahay. Waxaan arkaa in midabka la igu riixayo amase magaca runtii waa arrin aad u xanuun badan ciddii soomaali ah ee soomali tagoorta kooleey waa u diin xumo waxaan leeyahay diinka allaha nagaran siiyo.